खेलकुद समाचार Archives - Page2of6-
असोज १३, मंगलबार । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरले मुम्बई इन्डियन्सको सामु सुपर ओभरमा उत्कृष्ट खेल प्रर्दशन गरेर पराजित गरेको छ । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बैंगलोरले ३ विकेटको क्षतिमा २०१ रन बनाएको थियो । २०२ रनको विजय लक्ष्य पछ्याएक...
आईपीएलमा हैदराबादको लगातार दोस्रो हारः कोलकत्ता ७ विकेटले विजय
असोज ११, आइतबार । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा कोलकत्ता नाइट राईडर्सले सनराईजर्स हैदराबादलाई ७ विकेटले हराएको छ ।गए राति भएको खेलमा हैदराबादले दिएको १ सय ४३ रनको लक्ष्य कोलकत्ताले १८ ओभरमा मात्र ३ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । कोलकत्ताको जितमा शुभमन गिलले अविजित रहँदै...
झुम्का, नविन कुमार चौधरी, माघ २९ सुनसरीको रामधुनी नपाद्वारा आयोजित वडास्तरीय नकआउट महिला भलिवल प्रतियोगिताको आज भएको फाइनल खेलमा वडा नं. ९ विजयी बन्न सफल भएको छ । झुम्का हटिया फिल्डमा भइरहेको उक्त फाइनल खेलमा वडा नं. १ र ९ बिच भएको हो । स्वास्थ्य र अनुशासनको लागि आयोजना गरिएको...
झुम्का, नविन कुमार चौधरी, माघ २८ सुनसरीको रामधुनी नपाद्वारा आयोजित वडास्तरीय नकआउट महिला भलिवल प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा वडा नं. १ र ९ पुग्न सफल भएको छ । झुम्का हटिया फिल्डमा भइरहेको उक्त खेलको फाइनल भोली २ बजेदेखी हुने छ । स्वास्थ्य र अनुशासनको लागि आयोजना गरिएको उक्त प्रतियोगि...
झुम्का, नविन कुमार चौधरी, माघ २३श्री नव सृजनशिल युवा क्लव डुम्राहाको आयोजनामा संचालित प्रथम प्रदेश नं. १ स्तरीय नकआउट भलिभबल प्रतियोगिताको उपाधी इनरुवाले हात पारेको छ । सुनसरीको रामधुनी नपा वडा नं. ९ डुम्राहामा बुधबार सम्पन्न फाइनल खेलमा ३–०को सोझो सेटमा इनरुवा नपा खेलक...
झुम्का, नविन कुमार चौधरी सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित नेपाल सितोरियो कराँते संघ इचौलको आयोजनामा माघ १२ र १३ गते प्रथम नगर स्तरिय कराँते प्रतियोगिता कार्यक्रम हुने भएको छ । कराँते प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको र सहभागिका लागि सम्पूर्ण पक्ष तथा नगरका प्...
झुम्का, नविन कुमार चौधरी, कार्तिक १० १२औं सुनसरी च्याम्पियन नकाउट फुटबल प्रतियोगिता २०७६ अन्तर्गत शनिवार सम्पन्न फाइनल खेलमा रामधुनी फुटवल क्लब रामधुनी ५ ले जित हासिल गरेको छ । रामधुनीले शान्तिनगर फुटबल क्लब इटहरीलाई २–० गोलको अन्तरले पराजित गरेको हो । सुनसरीको...
रामधुनी ३ पिप्राहा खेल मैदानमा दोश्रो रामधुनी मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता सोमबारबाट शुरु भएको छ । स्वास्थ्यका लागि खेलकुद राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने मूल नाराका साथ रामधुनी यूवा क्लवको आयोजनामा र रामधुनी नगरपालिकाको संयोजनमा शुरु भएको हो । फुटबल प्रतियोगितामा आयोजक क्लवका अध्यक्...
नविन चौधरी, झुम्का प्रथम नगर स्तरिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत श्री चन्द्र कमल मावि मर्चैया सवैभन्दा बढि विधामा विजेता बन्न सफल भएको छ । १०० मि दौड, २०० मि दौड, ४०० मि दौड, ८०० मि दौड, १५०० मि दौड, ३००० मि दौड, ४ गुणा १०० रिले, ४ गुणा ४०० रिले, सर्ट फुट थ्रो, हाइ जम्प, लगं जम्प...